Kooxda Arsenal oo Ka Adkaatay Kooxda Liverpool “Sawirro” – Radio Muqdisho
Kooxda Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates Stadium 4-1 uga badisay kooxda Liverpool.
Kooxda Arsenal ayaa qeybtii hore ee ciyaarta dhalisay sedaxda gool,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Hector Bellerin, Mesut Oezil iyo Alexis Sanchez,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Jordan Henderson ayaa daqiiqadii 76-aad ee ciyaarta gool rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Liverpool.
Garsoorihii ciyaarta Anthony Taylor ayaa daqiiqadii 84-aad ee ciyaarta kaarka casaanka ah u taagay Ciyaryahan Emre Can.
Ciyaaryahan Olivier Giroud ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka afaraad u dhaliyay kooxda Arsenal.
Kooxda Arsenal ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta labaad,waxana ay leedahay 63-dhibcood,halka kooxda Liverpool ay horyaalka uga jirto kaalinta shanaad,iyadoo leh 54-dhibcood.